Maclin Durane iyo Qaaxo, Ma Da,a Been sheegtaa! – Rasaasa News
Maclin Durane iyo Qaaxo, Ma Da,a Been sheegtaa!
Jun 8, 2011 a Beensheegtaa!, adooda ah ee gabalka Ogaden degan ay odhan jireen "been Eebahay iguma qabanin." waxaan garan la, ahay waxa jira waa la ogyahay waxa ay dadka u khaldayaan?, bogga bahdilka saxaafada Internet-ka qorahey.com. Labadan nin waxay ku jiraan xiligii dadka da, Ma Da, Maclin Durane iyo Qaaxo, Waxaa kale oo aad halkan ka akhridaan beenta uu qoray
Kooxda Jwxo-shiil, amarka Eebbe Wayne da,a kasta oo ay yihiin kama xishoodaan beenta, waxayna jecel yihiin in ay been ka gadaan dadkooda, waxaase isweydiin leh maxay ka helayaan beenta?
Waxaanu maanta Idiin haynaa been aan sal iyo raadtoona lahayn oo labad duq ay ku sheegeen in ay la kulmeen nin ka shaqeeya wasaarada arimaha dibada ee dalka Denmark. Kulanka iyo sawirka saaranba waxay ahaayeen kuwa la qaaday sandkii 2006, xiligaas oo ay isla socdeen.
Labadan duq macalin Durane iyo Qaaxo, ma ayna imanin dalka Denmark waxay tageen dalka Sweden, waxaan aad ula yaabay beenta intaas la egg waxa kalifaya.
Kooxda Jwxo-shiil, ayaa had iyo goor Internetka ku soo xadha dagaalo been oo ka dhacay dalka, iyaga oo qoraalka geeska ka saara sawiro la qaaday sanooyin hore.
Waxaanu hore u kashifnay boggii ay sawirada ka soo qaadan jireen, oo uu leeyahay wariye Faransiis ah oo jecel kaydashada sawirada ciidamada, wiilkaas oo sawiro ka soo qaatay ciidamadii JWXO sanadkii 2006, xili uu booqday.
Maatna waxay ku soo qoreen bogga bahdilka saxaafada Internetka ee Qorahey.com, in Macalin Durane iyo Qaaxo ay la kulmeen xubin ka tirsan wasaarada arimaha dibada ee dalka Denmark, arintaas oo ayna waxba ka jirin. Sheekada ay cusboonaysiiyeen waxay dhacday sanadkii 2006, waxaadna ka akhrin kartaan halkan.
Waxaa kale oo aad halkan ka akhridaan beenta uu qoray, bogga bahdilka saxaafada Internet-ka qorahey.com.
Labadan nin waxay ku jiraan xiligii dadka da,adooda ah ee gabalka Ogaden degan ay odhan jireen “been Eebahay iguma qabanin.” waxaan garan la,ahay waxa jira waa la ogyahay waxa ay dadka u khaldayaan?
Abti-doon: “Kol Dhaw Baa Arinta Ogaden Laggaga Hadli Doonaa UN-ta”
Adeegsiga Eraybixinta Afka Somaliga, oo Idil Ahaanba ka Maqan Saxaafada Degaanka Somalida Atobiya